Dih’Art – 15 taona : hisy fanofanana « comédie musicale » (NewsMada) | AEMW
Dih’Art – 15 taona : hisy fanofanana « comédie musicale » (NewsMada)
Nosantarina, ny asabotsy teo, tetsy Antanimena, ny fanamarihana ny tsingerintaona faha-15-n’ny Dih’Art. Nanomboka teo, hisesisesy ny hetsika samihafa ka anisan’ny goavana indrindra ny atrikasa fampianarana « comédie musicale » ho an’ny ankizy.
Hotanterahina mandritra ny herinandron’ny 22 aogositra ity atrikasa ity. Mbola misokatra ny fisoratana anarana, izay anasan’ity klioba ity ireo ankizy enina hatramin’ny 14 taona. Araka ny fanazavan’i Rijamanitra, mpanorina sady mpitarika ny Dih’Art, nosafidina ny « comédie musicale » satria mifandray sy mifamatotra ny dihy, ny teatra ary ny hira. Eo koa ny maha fotoam-pialan-tsasatra ny andro ka mila miala voly sy mahafantatra zavatra hafa ny ankizy.
Raha izay ny an’ny kilonga, hisokatra ho an’ny rehetra kosa ny fiofanana hotontosaina amin’ny volana oktobra. Ahitana ny karazan-dihy rehetra izy ity, araka ny nambaran’i Rijamanitra hatrany. Azo ambara fa ho avo lenta ny fahalalana hozaraina amin’io, satria hisy mihitsy ny matihanina avy any ivelany, hitondra ny traikefany.
Hotohizana amin’ny fifaninanana ny fanamarihana ny faha-15 taona niorena’ny kaompania Dih’Art, amin’ny volana novambra. Toy ny mahazatra, hisy ny fampisehoana ho an’ny faran’ny taona, ny volana desambra.
Marihina fa niara-dalana tamin’ny fanokafana ity tsingerintaona ity, ny asabotsy teo, ny fitokanana ny trano vaovao an’ny Dih’Art, etsy Antanimena. Mitondra ny anarana hoe « centre de formation et de loisirs Dih’Art Madagascar » izy ity. Mampiavatka ny foibe ny fampianarana dihy ny ankizy dieny mbola kely ka tanjona ny hahatonga azy hahafehy ireo karazan-dihy rehetra. Eo koa anefa ny fanofanana ireo matihanina, hiatrika fifaninanana.
← Haparitaka ny boky torolalana ho an’ny fikarohana (NewsMada)
Stabilité politique : « Oui pour le dialogue », dixit Chissano (NewsMada) →